Casio SGW600H-1B Wrist Watch - Trivoshop na $ 64.95
Home Chevron ala akara ngosi ọla Chevron ala akara ngosi Casio SGW600H-1B Wrist Watch - Trivoshop
nnweta: ntụgharị efu: en.general.icons.icon_check_circle akara ngosi Naanị 8 hapụrụ!
Ọ bụrụ na ibi ndụ dị ndụ ma chọọ oge nke nwere ike ijide SGW600H na-enye atụmatụ ndị bụ isi. Site na compass na temometa, ihe ngosipụta oge oge ụwa na mita 100 na-eguzogide mmiri, ebe ọ bụla ị gara ụdị a ga-edebe gị n'ụzọ na oge.
Ejima ihe mmetụta -Digital compass na temometa
Oge ụwa na ngosipụta ụwa map
100 mita na-eguzogide mmiri
5.0 si 5
ụdị: kasị nso nso kasị nso nso Ntụle kacha elu Ọnụ ala kasị ala Na Foto Ugbu a Enyemaka
M n'ezie afọ ojuju na m ngwaahịa. Dị mfe iji. Nnukwu ọrụ, m ga-edozi ọzọ! Ihe ndi a enyerela ahia anyi aka.